एमालेको शिर झुक्यो, कसैले कल्पना गर्न नसक्ने कसुरमा पक्राउ परे एमालेका गाउँपालिका उम्मेदवार ! — newsparda.com
एमालेको शिर झुक्यो, कसैले कल्पना गर्न नसक्ने कसुरमा पक्राउ परे एमालेका गाउँपालिका उम्मेदवार !
नेकपा (एमाले)बाट ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका मिलनकुमार विष्ट (मनिष)विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजबिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगालाई पठाएको हो ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतले बैंकिङ कसुर तथा दोहोरो नागरिकता लिएको कसुरमा खोजबिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगालाई पक्राउ पूर्जी पठाएको डिएसपी सुकदेव खनालले जानकारी दिए ।
उनीविरुद्ध दोहोरो नागरिकता लिएको कसुरमा पनि उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट समेत अनुसन्धान सुरु भएको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ओखलढुंगाबाट दोहोरो नागरिकता लिएको उजुरी परेको छ । भ
उनी विरुद्ध अर्का उम्मेदवार अशोक कुमार कार्कीले दिएको उजुरीमा यस्तो गम्भिर खुलाशा भएको हो । विष्टले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिलन कुमार विष्टको नाममा र ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट होम बहादुर विष्टको नाममा नागरिकता लिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
प्रमाण सहित उल्लेख भएको उजुरीमा उनलाई कर्जा सुचना केन्द्राले यही २०७८ साल फागुन १० गते कालोसुचीमा राखेको हो । उनले संचालन गरेको सिद्धिलक्ष्मी ग्रुप एण्ड फार्म हाउसले बैंकबाट लिएको कर्जा नतिरेपछि कालोसुचीमा राखिएको कर्जा सुचना केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।